हरेक आमा बुबाले जान्नै पर्ने कुरा बच्चाको बाल विकास मा केके कुरा ध्यान दिने त सबैको जानकारिको लागि सेयर गरौ ?् - Sudur Khabar
हरेक आमा बुबाले जान्नै पर्ने कुरा बच्चाको बाल विकास मा केके कुरा ध्यान दिने त सबैको जानकारिको लागि सेयर गरौ ?्
Sudur staff February 13, 2018 February 13, 2018 जीवनोपयोगी 0
“गर्भ रहँदा ३० प्रतिशत – गर्भको रुपमा आमाको पेटमा रहँदा शिशुको ३० मानसिक तथा बौद्धिक विकास भइसकेको हुन्छ । पहिलो बर्ष २५ प्रतिशत – शिशु जन्मेको पहिलो बर्ष उसको थप २५ प्रतिशत मानसिक एवं शारीरिक एवं बौद्धिक विकास भइसकेको हुन्छ । र एक बर्ष भित्रमा बच्चाको ५५ प्रतिशत मानसिक विकास भइसकेको हुन्छ ।”
‘दोस्रो बर्ष २५ प्रतिशत – बच्चाको उमेर एक देखी दुई बर्ष हुँदाको अवधीमा थप २५ प्रतिशत मानसिक एवं शारीरिक विकास भइसकेको हुन्छ । र बच्चा दुई बर्ष पुग्दा उसको ८० प्रतिशत मानसिक विकास भइसकेको हुन्छ ।’
‘दुई देखी पाँच बर्षमा १० प्रतिशत – बच्चाको उमेर दुई देखी पाँच बर्ष पुग्दा त्यो बीचको अवधीमा मानसिक बृद्धि १० प्रतिशत हुन्छ । यो संगै जन्मेको पाँच बर्ष पुग्दासम्म बच्चाको ९० प्रतिशत विकास भइसकेको हुन्छ ।’
‘बाँकि अवधी १० प्रतिशत : जब बच्चा पाँच बर्ष भन्दा माथि जान्छ त्यसपछि विकास हुने भनेको १० प्रतिशत मात्रै हो । त्यसैले अभिभावकहरुले आफ्ना सन्तानको गर्भका बेलामा नै विशेष स्याहार गर्नुपर्छ । गर्भदेखी दुई बर्षको बीचमै बच्चाको ८० प्रतिशत मानसिक विकास भइसक्ने भएकोले त्यतिवेलै राम्रो स्याहार पाएमा उसको उज्वल भविस्यको निर्धारण हुन्छ । गर्भवती देखी सुत्केरी हुँदासम्मको आमा र शिशुको खानपान र स्याहारमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।’
तपाई कतिको स्वस्थ हुनुहुन्छ ? मोटो मानिस स्वस्थ नहुनुका कारण . जानकारि लिनुहोस …
यसकारण रक्सि पिएपछि कुनै पनि भाषामा कुरा गर्न सजिलो हुन्छ अपत्यारिलो रक्सिको फाईदा ..
तपाई हाम्रै बारिमा फल्ने काचै केरा खाएर यि फाईदा लुट्नुहोस् ।